Okokuzithokozisa kwe-Airbnb: Bungaza Okokuzithokozisa ku-Inthanethi
Bungaza okokuzithokozisa ku-inthanethi
Joyina umphakathi wababungazi ohlanganisa umhlaba ngendlela engakaze ibonwe.
Okokuzithokozisa ku-inthanethi kuyizinto ezenziwayo ozibandakanya kuzo ezisungulwe ngababungazi ezidlulela ngale kohambo noma ikilasi elijwayelekile. Futhi manje usungakubungazela noma ngubani, noma kuphi.
Yabelana ngobungcweti bakho futhi ubonise abanye indlela ophila ngayo.
Hlangana nezivakashi zomhlaba wonke
Yenza umhlaba uzwakale umncane futhi unobungani obedlulele.
Yenza imali ngokwenza okuthandayo uthola usizo ku-Airbnb.
Uma kakade ungumbungazi wokokuzithokozisa, siyakwamukela futhi! Ukuze uqale ukubungaza ku-inthanethi, kuzodingeka wakhe okokuzithokozisa okusha ceke bese ukuthumela ukuze kuhlolwe kulandela iphrosesi engezansi.
Zakhele okokuzithokozisa kwakho
Konke okokuzithokozisa kuqala ngezindinganiso zethu zekhwalithi—ubuchwepheshe, ukufinyeleleka nokuxhumana. Kodwa phinde ucabange ngokuthi uzibandakanya kanjani nezivakashi ku-inthanethi futhi unciphise izinto ezingase zizidinge ukubamba iqhaza. Lapho uba nombono, qala inqubo yokuthumela.
Sitshele ngombono wakho
Okulandelayo, uzodinga ukuchaza into yakho eyenziwayo kokubili ngokusebenza kwayo kanye nekhasi lakho lokokuzithokozisa kwesikhathi esizayo. Situsa ukuthi wabelane ngenani lalokho okuhlinzekayo ngokuchaza okuningiliziwe, uqale ngenani eliphansi kuze kube yilapho uba nokushiwo ngabanye okuthile, bese usetha ubude bube yimizuzu engu-90 noma ngaphansi.
Thumela okokuzithokozisa kwakho
Sekusele kancane! Lapho ufika esinyathelweni esithi Indawo, hlola ibhokisi elithi Yebo, lokhu okokuzithokozisa ku-inthanethi. Lapho konke okunye sekuphothuliwe, usukulungele ukuthumela. Iqembu lethu lizokufunda futhi likwazise uma kuvunyelwa emavikini angu-2–4.
Setha bese uqala ukubungaza
Ngenkathi usalindile, ungakhetha indawo emelela wena nento yakho eyenziwayo bese uqala ukuhlela ukusethwa kwekhamera yakho, ukukhanya nomsindo. Ungaqala futhi uzijwayelanise nenkundla ye-Zoom yezingqungquthela. Ungakhathazeki, ngaphambi kokuthi uqale ukubungaza sizokutshengisa izinsiza eziningi ukukusiza uphumelele.
Qala usungule okokuzithokozisa kwakho
Indlela ababungazi ababelana ngayo ngomhlaba wabo
Laba babungazi baletha umoya wokokuzithokozisa esikrinini ngezinto ezenziwayo ezehlukile zamaqembu amancane ezenziwa ndawonye ngenkathi sisaqhelelene.
Ukuzola kwengqondo kwasepulazini lase-Scotland, kuhambisana nokuhlangana nabangane abathile abantofontofo.
Iya kokuthi okokuzithokozisa
Ubumnandi Bokubhaka Komndeni
Isikhathi esijabulisayo ekhishini ezinganeni nakubantu abadala esiphela sekunenqwaba yamakhekhe ashaya khona abhakiwe.
Kungumbukiso ngokwengxenye futhi kuyikilasi lokuqeqeshwa ngokwengxenye, izivakashi zifunda indlela yokucabanga njengomenzi womlingo namaqhinga abangawenza ekhaya.
Veza konke Okokuzithokozisa ku-Inthanethi
Awuwedwa—uzokwazi ukufinyelela amathuluzi okufundisa namathuba ukukusiza ukhule njengombungazi nosomabhizinisi.
Imihlahlandlela, amacebiso namaqhinga okubungaza okokuzithokozisa okuphumelelayo ku-inthanethi.
Funda ukuchwephesha ebucikweni bokubungaza, ku-inthanethi noma ngenye indlela.
Ithimba elisiza umphakathi
Xhumana nabanye ababungazi usebenzisa amaqembu nemihlangano ye-Facebook.
Ngiyivula kanjani i-akhawunti?
Uzosebenzisa ifomu elifanayo lokuthumela njengakho konke okunye okokuzithokozisa. Uma ufika esinyathelweni esithi Indawo, thikha ibhokisi elithi Yebo, lokhu okokuzithokozisa kwe-inthanethi. Ithimba lethu lizobe selihlola okuthumele ngokushesha futhi likwazise uma kuvunyiwe emavikini angu-2–4.
Yini ehlukile ngokubungaza okokuzithokozisa ku-inthanethi?
Okokuzithokozisa okukhanga kakhulu nokungabandlululi kudinga kuphela amahora angu-1-2 esikhathi nezinto ezidingekayo ezimbalwa zokubamba iqhaza. Izindleko zokokuzithokozisa ku-inthanethi ngokuvamile zingaphansi ngemali kunalokho okubungazwa mathupha, ngakho-ke amanani akho kufanele futhi akubonise lokhu. Futhi kudinga ikhamera nokuxhunywa ku-inthanethi okunamandla ukuze usakaze okulalelwayo nevidiyo ngesikhathi sokokuzithokozisa kwakho.
Ngizokusakaza kanjani okokuzithokozisa kwami ku-inthanethi?
Uzosebenzisa inkundla ebizwa nge-Zoom evumela zonke izivakashi zakho ukuthi zijoyine okokuzithokozisa ngasikhathi sinye, eyenza kube nokulalelwayo nokwevidiyo ukuze wonke umuntu akwazi ukuxhumana futhi inikezela ngamanye amathuluzi akusiza ubungaze. Lapho okokuzithokozisa ku-inthanethi kwakho kuvunyelwa, uzothola isimemo sokuthi uvule i-akhawunti ye-Zoom yamahhala. Ngemva kokuvula i-akhawunti, hlola ukuxhunywa kwakho ku-inthanethi ngokujoyina umhlangano wokuhlola futhi uzijwayelanise nezici zayo.
Kuyini Okokuzithokozisa ku-Inthanethi?
Njengasekuqaleni, Okokuzithokozisa ku-Inthanethi kwethula izivakashi kubabungazi abangochwepheshe, kuvule indlela yokuhlangana nokuxhumana nabantu abasha futhi kwenze kube khona isimo esimsiza kalula umuntu okude ohlukanisiwe nabanye futhi osekhaya. Abantu bangajoyina okokuzithokozisa ku-inthanethi besekhaya noma bekuphi emhlabeni—konke abakudingayo ukuxhunywa ku-inthanethi. Akudingeki ukuthi babe sendaweni ethile noma badinge ukuletha okuningi ukuze babambe iqhaza.
Funda kabanzi ngokubungaza Ngokokuzithokozisa kwe-Airbnb